February 13, 2021 - Padaethar
February 13, 2021 by Padaethar
ဆန္ဒပြပွဲမသွားခင် သင့်ဖုန်းကို လုံခြုံအောင်လုပ် ဒါတွေ မဖြစ်မနေလုပ်သွားပါ ဆန္ဒပြပွဲမသွားခင်သင့်ဖုန်းကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်လုပ်မလဲ ? ဒီရက်ပိုင်း risk များတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ Lock ကို Fingerprint , Face ID , Pattern Lock တွေနဲ့လုံးဝမထားသင့်ပါ။ Passcode/PIN (ဂဏန်း ၆ လုံး) ဖြင့်သာထားပါ။ (မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မထားရ ၊ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲသိမယ့် ဂဏန်း ၆ လုံးသတ်မှတ်ပါ) iPhone မှာဆိုရင် Passcode ၁၀ ကြိမ်ထက်မှားရိုက်မိမယ်ဆိုရင် ဖုန်းတွင်း Data အကုန်ပျက်စေမယ့် Erase data ကို on ထားပါ။ (iOS setting > Face ID & Passcode > Erase data … Read more
CDMမှာပါဝင်ပေးဖို့ ရုံးရှေ့မှာ ဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူပရိသတ်တွေချီးကျူးနေကြတဲ့” ကျော်ထက်အောင်” ပရိသတ်ကြီးရေ.. အမိုက်စားအသံပါဝါကြောင့် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် Myamnar Idol ကနေ ပရိသတ်တွေစတင်သိကျွမ်းခဲ့ပြီး အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ရပ်တည်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အနုပညာရှင်ကတော့ ကျော်ထက်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေအများဆုံးရရှိထားတဲ့ ကျော်ထက်အောင်ကတော့ လတ်တလော မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့တန်းတူရပ်တည်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပထမနေ့ကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သွေးတစ်သားတည်းရပ်တည်နေခဲ့တဲ့ ကျော်ထက်အောင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က မထင်မှတ်ထားတဲ့ သူ့ူ့ရဲ့လုပ်ရက်တချို့ကြောင့် ပြည်သူပရိသတ်တွေအများအပြား ချီးကျူးလေးစားနေခဲ့ကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။ ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ရန်ကုန်အကောက်ခွန်ရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရုံးတက်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို CDM မှာ ပါဝင်ပေးကြဖို့ ကျော်ထက်အောင်က ဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပြီး အားလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက် မရှက်မကြောက်ဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ချီးကျူးစရာလုပ်ရပ်လေးကို ပြည်သူပရိသတ်တွေအများအပြားက သဘောကျချီးကျူးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ အဆိုပါနေ့က အကောက်ခွန်ရုံးရှေ့မှာ … Read more
မင်းကိုနိုင်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်များအပါအဝင် (၇)ဦးအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
မင်းကိုနိုင်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်များအပါအဝင် (၇)ဦးအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ် နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃။ မင်းကိုနိုင် (ခ) ပေါ်ဦးထွန်း၊ ကျော်မင်းယု (ခ) ဂျင်မီ၊ ထွေးလင်းကို (ခ) လင်းလင်း၊ အင်းစိန်အောင်စိုး၊ မျိုးရန်နောင်သိမ်း၊ အိမ့်ပိုးဥ (ခ) အိပန်ဆယ်လို နှင့် မောင်မောင်အေး တို့အား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ယနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ယန္တရားကို ပုံမှန်လည်ပတ် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ၎င်းတို့က လူသိများသည့် အခွင့်အရေးကို အသုံးချကာ … Read more
ရှယ်ပြီးမှ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ရဟန်းများမကြွထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး
ရဟန်းများမကြွထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး ၁။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခရီးဦးမကြိုဆိုသော အိမ်၊ ၂။ မြတ်မြတ် နိုးနိုး ရှိမခိုးသော အိမ်၊၊ ၃။ နေရာထိုင်ခင်း မပေးသော အိမ်၊ ၄။ ထင်ရှားရှိသော လှူဖွယ် ဝတ္ထုတို့ကို သိုဝှက်ထားသော အိမ်၊၊ ၅။ လှူဖွယ်အများရှိလျက် အနည်းငယ်မျှသာ လှူသော အိမ်၊ ၆။ မွန်မြတ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထု ရှိပါလျက် မကောင်းသည်ကို လှူသော အိမ်၊၊ ၇။ မရိုမသေ ပေးလှူသော အိမ်၊ ၈။ တရားနာရန် မချဉ်းကပ်သော အိမ်၊၊ ၉။ တရားကို ကောင်းစွာ မနာကြားသော အိမ်။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊၃၊၁၉၂) (မြန်မာ၃၊၁၉၃) ကြည်ညိုထိုက်သော ရဟန်းတော်များ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ သာသနာတော်၌ ရဟန်းတော်များ များစွာရှိပါသည်။ ထိုရဟန်းတော်များအနက် … Read more
အင်တာနက်ကြီး ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook နဲ့တခြားapp တွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း………..Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) အင်တာနက်ကြီး ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook နဲ့တခြားapp တွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း………..Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) Internet ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook အပါအဝင်တခြားappတွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း။ Speedify ကမြန်မာပြည်မှာ Internet ပိတ်ဆို့မှုတွေကို Awareness ရတဲ့အတွက် အစိုးရက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ App ကိုသုံးပြီး Internet အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Download လုပ်ပြီးတာနဲ့ 50G free သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ ချွေတာသုံးဖို့လဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Visa Master တွေပါပိတ်ပစ်ရင် ဝယ်မရမှာစိုးလို့ပါ။ 1. App ကို အရင် download ပါ 2. VPN ကိုပိတ်ပြီးမှ App … Read more
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေကို အပျိုလေးတွေလို ဖြစ်သွားစေမည့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စျေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးတွေ မသုံဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲတာကို ပြန်လည်တင်းရင်စေပြီး ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဆီးဖြူသီးဟာ မိန်းမကိုယ်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ နည်းပါးမှာပါ။ ဆီးဖြူသီး (၅ လုံးလောက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ။ ပြီးရင် ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေး (ရေချိုးရေခွက်) တစ်ခွက်စာထဲမှာ ဆီးဖြူသီး (၅) လုံးကို ထည့်ပြုတ်ပါ။ ဆီးဖြူသီးလေးတွေ နူးပျော့လာပြီ အရောင်လေးပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ရေနွေးအိုးမီးအပူပေးတာကို ရပ်လိုက်ပါ။ … Read more
ရည်းစားသက်တမ်း ၄နှစ်မှာ သိန်း ၃၀ လောက် စုမိသွားတဲ့ ငွေစုနည်းသစ်
ရည်းစားသက်တမ်း ၄နှစ်မှာ သိန်း ၃၀ လောက် စုမိသွားတဲ့ ငွေစုနည်းသစ် ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ ၁ပုံလောက်ပေ့ါ) တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ် Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ KBZ_Call_Deposits_account လုပ်ထားလိုက်တယ် အဆင်ပြေတဲ့လူ သွားလို့ရအောင်ပေါ့ အဲ့လိုနဲ့ စု လာလိုက်တာ ဘဏ်စာအုပ်လေး ၂နှစ်နဲ့ ၄လ ပြည့် ( ရည်းစားသက်တမ်း ၄နှစ်နဲ့ ၄လ)မှာ သိန်း ၃၀ လောက် စုမိသွားတယ်။ ဘဏ်စာအုပ်လေးခနခနထုတ်ထုတ်ကြည့်ပြီး ပီတိတေဖြာတဲ့ အရသာကလေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ😜😜😜 … Read more
လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို ပျိုမေတို့ သိရှိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀) ချက်”
ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့်သူ သို့မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို ပျိုမေ တို့ စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ရည်းစားများတဲ့ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်မိရင် ပထမဆုံးထိခိုက်နစ်နာရမှာက ပျိုမေတို့ဖြစ်ပြီးတော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် နောင်တရစရာ စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယခုလို လူရှုပ်တစ်ယောက်ကို မရွေးချယ်မိဖို့အတွက် သူဟာလူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိထားမိစေနိုင်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကို မျှဝေပေးပါရစေ။ ၁။ သင်နဲ့တွဲနေတာကို အခြားသူတွေ မမြင်လိုဘူး သင့်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်က တကယ်ချစ်တဲ့အခါ တကမ္ဘာလုံး သိအောင်ချပြဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သိခွင့်ပေးတာတွေ … သင့်အကြောင်းပြောပြတာတွေကို သူသေချာလုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ဟာသူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုလို အရမ်းကိုအရေးပါလို့ပါ။ တကယ်လို့သာ သင်နဲ့တွဲသာတွဲနေရတယ် လူတွေ့မခံချင်တာတွေ၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လူမသိအောင်ချိန်းတွေ့တာတွေ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေကိုလည်း သိခွင့်မပေးတာတွေ လုပ်နေခဲ့ရင် … … Read more
ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင်တော့ သူသင့်ကိုအပျော်တွဲနေတာပါ မိန်းကလေးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောကျ်ားလေးတွေလည်း အရမ်းကို မာယာကြွယ်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်မချစ်ပဲ အပျင်းပြေသဘောမျိုး ကစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို မိန်းကလေးဖက်က မသိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုတကယ်ပဲ ချစ်သလိုလို၊ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ မသေချာမရေရာကြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ခံစားရတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယောကျ်ားလေးမှာ ဒီလိုအချက်တွေရှိနေရင်တော့ အချိန်ကုန်ခံ မနေပါနဲ့။ သင့်ကို ကစားနေတာပါ။ (၁) ပုံမှန်အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူး သင့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖုန်းဆက်တာတွေ၊ စာပို့တာတွေ၊ chatting တွေ နေ့တိုင်း လုပ်မှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပါတဲ့အချိန်ကျရင် အသည်းအသန်လွမ်းပြပြီး စိတ်မပါရင် အဖက်တောင် မလုပ်ဘဲ (၃၊ ၄) ရက်လောက် အဆက်အသွယ် မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ်၊ သင့်ကို အပျင်းပြေရုံ … Read more
ဒီလိုအေျပာေတြေၾကာင့္ မိန္းကေလး ေတြ ဘဝပ်က္သြားၾကတာပဲ…
ခုခေတ်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးအများစု ဘယ်လိုဘဝပျက်သွားသလဲဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီ post ကို တင်ရတာပါ ။ အစအဆုံးဖတ်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်ပါနှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင်ပေါ့ ” အရမ်းချစ်တယ် ချစ်ရယ် “” မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးပါနော့်”” ဟင်အင်း မောင် ”” ချစ် ကြောက်တယ် မလိုက်လျောပါရစေနဲနော် မောင် “” ချစ်ကလည်းကွာ “” မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါကွာ ” “ဟင်အင်း မောင့်”” ကျွန်မ တို မိန်းမသား ဘဝ မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အပျိ ုစင် ဘဝ လေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ “” မပေးဆပ်ပါရစေနဲ မောင် ”” တစ်သက်လုံး တန်ဖိုးထားလာရတဲ့ “” အပျို… Read more